Sideey Muqdisho ku gaari kartaa Nidaam iyo Istrataatiijiyad Amni oo la isku Halayn karo,? – Hornafrik Media Network
Magaalada Muqdisho waa caasimadii dalka waxeey xarun utahay 18 ka gobol ee Somalia ka koobtanahay, maantana isku badalay dowlad goboleedyada.
Burburkii kadib sida aad la socotaan waxeey hooy noqtay dagaalo sokeeye, kuwa diimeed iyo isku dhacyo kala duwan ee dhex mara badanaa kooxaha hubeysan ee kuwada sugan caasimada.Muqdisho.
dadka ku nool buburkii dalka kadib kama nasan dhawaqa madaafiicda iyo qaraxyo, marka laga reebo waqtigii koobnaa ee Maxkamadihii islaamku gacanta kuwada dhigeen amaanka caasimada.
Hadaba muqdisho si nidaam iyo kaladanbeyn u hesho qaabkee ugu wanaagsan ee loo sugi karaa amaanka muwadintiinta gobolka ku noool iyo bulshada kale ee kusoo hiratay ?
Inta badan tilaabooyinka nabadgelyo ee loo soo bandhigo hawlqabad waxay u baahan yihiin nidaam dagan dayactir iyo ka warqab joogto ah si loo tixraaco, loogana dhabeeyo hirgalintooda.
Waxa jira tilaabooyinka qaar oo yar yar, balse amaanka muhiimad gaar ah u leh in hal mar la meel mariyo, kadibna ay noqdaan nidaam waara oo mustaqbalka la tix raaco, hadbana horumar lagu sii sameyn karo.
Tusaale ahaan Taraafikada oo nidaam sharci loo sameeyo ayaa tilaabo awoodeed amaanka wax badan ka qaban karta ah, hadaan la qiimeyna dhibaato xoog leh abuuri kara. Dib umilicso dhacdadii Zoobe wararka qaar ayaa shegaya in ay sababtay Baaburka xamuul ah oo aan isticmaalin seedka saxda ah dabadeedna ku dhacay baabur kale halkaasna uu dhibaato weyn ku gaarsiyay shacab aan waxba galabsan.
Ujeeda aan usoo qaatay ayaa isticmaalaka seed qaldan waa calaamad digniin u ah in baabur waduhu ku socdo hab qaldan una baahanyahay ka warqab dagdag ah oo poliska xaruntaas qaado.
Sidaa darteed ayaa loo bahanyahay in la helo nidaam iyo is warqab kala danbeyn caasimadu yelato, si looga gudbo hanaanka isku dhex yaaca iyo masuuliyad isku tuurka ka dhextaagan caasimada.
Inagoo raaceyna kala sareynta iyo hab dhismeedka awoodaha waxaan aragti ahaan ayidayaa in looga danbeeyo Ggudoonka Maamulka Gobolka Banaadir masuuliyada amaanka laguna wareejiyo guud ahaan caasimada, taas oo fudueyneysa in marxalada caasimada isbadasho, lana helo hab ay kula xisaabtami karaan Maamulka Gobalku Masuulkii dayaca shaqada loo igmaday, islamrkaana hirgalo habraac, ku salaysan Isla Xisaabtan aan Jaantaa Rogan ahayn.
Dhibaatada Maanta taagan.
Sidaan la wada socono dhamaan hay’adaha dalwladu ka koobantahay waxeey xafisyadedu ku yalaan caasimada,.
Heerar kasta oo dowladu ka koobantahay waxeey ka howl galaan gobolka banaadir ha ahaato militrigii, Nabad sugidii, Booliskii waxeyna soo saraan amaro kala duwan oo aan la qoon cida fulineysa iyo cida iska leh ineey soo saarto, madaama ay jiraan masuliyadu ku kala magaacaban shaqada, taas ayaana abuureysa ineey ka faa’idaystaan Qaswadayaasha kal duwan iyo cadowga is biirsaday.
Gobolka banaadir hadii lagu wareejiyo maxaa is badalaya?
Caasimadu waxey ka koobantahay 17 dagmo waxaa hubaal ah in Maamulka gobolku balaarin karo awooda, una qaybin karo degmooyinka, laamaha gobolka, kulana xisaab tami karo.
Laamaha sirdoonka gobolka, poliska iyo qaybaha kala duwan ee amaanka waxeey dhamaan hoos imanayaan Gudoomiyaha gobolka oo hadii wax dhacaan Su,aalo ka weydiin karo qaabka iyo sababta ay u fuduaatay ama dhacdo nuuceey doonto ha ahaate ay u dhacday, waxaan taa mesha ka saareysaa in masull shaqo loo dhibay uusan ku hoos ganban is dhexyaac iyo kala qeexid la’aanta Waajibaadka Shaqo, sida hadaba jirta.
Caaismadaha aduunka markaad Habkaa amaanka dib u raacdo waxaa masaul ka ah mamulka Caasimada iyo Poliska, hadii ay dhacaan awoodo aysan qaadi karin, waxeey caawinaad ka dalbanayaan Hay’adaha ka sareeya si looga hortago hujuumaada awooda leh ee ka tan badan gobolka.
Maamulka Gobolku qaabkuu ku yereyn karaa amaandarada Caasimada?
Si loo xakeemeeyo dhibaada maalin lahaa iyo dhacdooyinka aan la aqoonsan waxaa muhiima in gobolka Banaadir keeno habab cusub oo lagu raad raaco bulshada sida maareynta macluumaadka. (MM)
Hawlgallada ku habboon ee hawlahan waxay noqon karaan:
• Maareynta aqoonsiga/identity Management
• Maareynta lasocoshada/Continuity management
• Qoondaynta macluumaadka/ information classification
• Maareynta dhacdada/ incident management
• isbadal lagu sameeyo maareeynta/ change management
• Maaraynta adeegga iyo taageerada/ service and support management
• maareynta oggolaanshaha yacni Ruuxa sharciyan ku shaqo leh/ authorization management
Iyadoo maamulka uu Dajinayo hab aqoonsi, taasoo ku qasbi karta ruux kasta oo caasimada ku nool inuu aqoonsigiisa ku adeegto. Tusaale hadii aad doneysid inaad teleefon Ka isticmashid shirkada Hormuud waa inaad ku adeegtaa Security numebrkaada si dabagal loogu sameyn karo hadii laga shakiyo adeegtaha
Ha lagu wareejiyo gobolka amaanka caasimada si lo yareeyo dhacdooyinka amaandaro ee Caasimada.
WQ:Ahmed Abdulahi kaboole (Ahmed Daaci)
Falaqeeya arimaha amaanka iyo Xagjirnimada
Arday: cilmiga siyaasada Mälardalen University Västerås